FBC - Oobaaman haasaa miiran guutame taasisan
Oobaaman haasaa miiran guutame taasisan
Finfinnee, Amajjii 3,2009(FBC) – Preezdaantiin Ameerikaa Baaraak Oobaaman haasaa adda ba’umsaa Chiikaagotti taasisaniin Ameerikaanonni demokraasii isaaniif waardiyyaa akka dhaabbatan gaafatan.
Deeggartoota isaanitiif haasaa taasisaniinis, biyyisaanii isaan aangoo qabachuun dura sadarkaa irra turterra fooyyofteetti jedhan.
Yeroo filannoo galmaanan ga’a jechuun waadaa kan galan; shororkummaa ittisuu, Oosaamaa Biin Laadan ajjeesuu, imaammata fayyaa harka qalleeyyii deeggaru hojiirra oolchuu, maqaa Ameerikaa ol guddisuu, carraa hojii uumuu, dhimma nuukleeraa Iiraan dhukaasa malee hiikuu hunduu milkaa’aniiru jedhan.
Garuu amma dhimmi Ameerikaanotaa demokraasii waggoota 200 oliif ijaarrame tiksuudha jedhan.
Deeggartoonni Oobaamaa ammas aangorra turiin gaafatanis, preezdaantichi biyyattiin Ameerikaa akka taate yaadachiisanii, akkuma isaan preezdaantii isaan duraarraa nagayaan aangoo fudhatan preezdaantii haaraa filatamaniif taayitaa dabarsuun aadaa Ameerikaati jedhan.
Ameerikaatti namni tokko preezdaantii ta’ee filatamuun biyyattii gaggeessuuf carraa 2 qofa qaba.
Preezdaantiin gurraachi Ameerikaa yoo hogganu Baaraak Oobaaman isa jalqabaati.
Biyyattiif ammoo preezdaantii 44ffaa. Oobaaman addunyaarrattillee jijjiirrama ni fiduun abdatamaniiti bara Faranjootaa 2008 gara preezdaantummaatti dhufanii si’a 2 filatamuun Ameerikaa kan bulchan.
Haasaa adda ba'umsaa Oobaaman Chiikaagotti taasisan kanaan deeggartootaa fi maatii isaanii galateeffataniiru. Maqa isin na cinaa turtaniifan waanan raawwachuuf karoorse raawwadhe; dandeenyerra. Ammas ni dandeenya; Waaqni Ameerikaa yaa ebbisu jedhan Oobaaman.
Preezdaantii haaraa ta’anii kan filataman Doonaald Traamp akka Faranjootaa Amajjii 20 muudamuun aangoo qabatu.
Oduuwwan Biroo « Ministirri Infoormeeshinii Gaambiyaa preezdaant Yaahiyyaa Jaameeh mormuun aangoo gadhiisan	Ijiptiin qaala’iinsi gatii sadarkaa olaanaa ishee mudataa akka jiru himame »